Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Delta Waxay Dib U Bilaabaysaa Duulimaadyadii Atlanta-San José ee Joogsi La'aanta
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Xiriirkii la soo celiyey ee Gegida Diyaaradaha ee Dunida ayaa kor u qaada marin u helka Madaarka Silicon Valley.
Duulimaadka habeenka ah wuxuu ka tagaa San José markay tahay 10:55 PM (PST), isagoo imanaya Atlanta qiyaastii 4.5 saacadood kadib 6:30 AM.
Delta Air Lines si ay ugu adeegsato diyaaradaha Boeing 757 duulimaadyada San José-Atlanta.
Delta Air Lines waxay joojisay adeegga u dhexeeya SJC iyo ATL sannadka 2020 sababtuna tahay masiibada COVID-19.
Laga bilaabo caawa, socotadu waxay ku raaxaysan doonaan helitaan iyo sahal badan marka ay ka duulayaan San José kuna sii jeedaan Atlanta. Masuuliyiinta Madaarka Caalamiga ah ee Norman Y. Mineta San José (SJC) ku dhawaaqay maanta in maalin walba adeeg aan joogsi lahayn loo Madaarka Caalamiga ah ee Hartsfield-Jackson Atlanta (ATL) dib u bilowdaa Delta Air Lines caawa.
Duulimaadkii habeenka wuxuu ka baxayaa San José markay tahay 10:55 PM (PST) isagoo saarnaa diyaarad Boeing 757, wuxuuna yimid Atlanta qiyaastii 4.5 saacadood kadib 6:30 AM (EST).
Saraakiisha garoonka ayaa tilmaamaya in gaadiidka xagaaga oo xoog leh, duulimaadyada soo laabanaya, iyo maqaayadaha, dukaamada, iyo tanaasulaadyada dib loo furay ay muujinayaan adkeysiga SJC iyo la-hawlgalayaasheeda ganacsi. In kasta oo Gobolka Kaliforniya uu ka saaray qaar ka mid ah shuruudaha COVID-19, dadka safarka ah ayaa weli looga baahan yahay inay xidhaan maaskaro, Madaarkuna wuxuu sii wadaa dhiirri-gelinta fogeynta bulshada.
"Ku -noqoshada adeegga Atlanta waxay u taagan tahay guul weyn oo ka soo kabashada safarka," ayuu yiri John Aitken, Agaasimaha Madaarka Caalamiga ah ee Mineta San José. “Waa markii labaad oo Delta dib loo bilaabo muddo toddobaadyo gudahood ah, waxayna qabteen shaqo aad u weyn oo ah qorsheynta iyo dib-u-soo-celinta suuqyada muhiimka ah si isku mid ah iyadoo ay sii kordhayaan tirada rakaabka. Hartsfield-Jackson Atlanta International waa garoonka ugu mashquulka badan adduunka, waana ku faraxsanahay inaan dib ula xiriirno magaalada Atlanta iyo shabakadda caalamiga ah ee meelaha ay gaarto. ”
Atlanta waxay ku noqotaa liiska adeegga hawada Delta ee SJC ka dib markii dib loo bilaabay adeeggii aan joogsiga lahayn ee Minneapolis-St. Paul (MSP) oo ka socda SJC bishii Luulyo 19. Delta Air Lines waxay joojisay adeegga u dhexeeya SJC iyo ATL sannadka 2020 sababtuna tahay masiibada COVID-19 iyo hoos u dhaca safarka ee la xiriira.